Soomaaliya oo Kaalinta u Hoosaysa Ka Gashay Diiwaanka Dalalka ay Fududahay Ka Ganacsigooda | WWW.JUBBALANDVOICE.COM
Published on January 18, 2020 by admin · No Comments
Warbixin cusub oo uu soo saaray bangiga caalamka ayaa lagu cadeeyay in dalkeena Soomaaliya uu kaalinta 190aad ka galay baadhitaan lagu eegayay suura galnimada iyo fudaydka ay ganacsatadu hawlohooda ganacsi uga fushan karaan 190 kamid ah dalaka caalamka.
Daraasadan ayuu bangigu ku eegaa bay’ada guud ee shaqo ee daka shuruucda ilaalinta hantida gaarka ah, helitaana ogolaanshooyinka ganacsiga daruuriga u ah, musuqa iyo saamaynta uu ku leeyahay ganacsatada iyo hawlohooda shaqo.
Xawaaraha intarneetka daka oo saamayn wayn ku leh ganacsiga ayaa kamid ah waxyaabaha lagu eegay daraasadan iyada oo isku celceliska xawaaraha intarneetka dalka lagu qiyaasay 2.4 MB sikin walba.
Waxaa sidoo kale uu bangigu daraasadan ku sheegay in dalku uu kaalinta 180aad kaga jiro 180ka dal ee la daraaseeyay heerkooda musuq isaga oo helay 10 dhibcood oo kamid ah 100kii dhibcood ee lagu qiimaynayay.
Kaalinta uu dalku kaga jiro diiwaankan ayaan is badalin tan iyo sanadii 2014ka oo uu bangigu bilaabo in uu qiimeeyo duruufaha shaqo ee dalka ka taagan isla markaana barbar dhigo dalalka kale ee daraasadan qaybta ka ah.